Marc Ravalomanana sy Zafy Albert Nihaona manokana teny Ivandry
Nihaona manokana teny amin�ny amin�ny Villa La Franchise Ivandry ny filoha teo aloha Zafy Albert sy Marc Ravalomanana omaly.
Tsy nisy nipika ny resaka nifanaovan’ny roa tonta, izay naharitra 45 minitra. Tsy nivaona tamin’ny raharaham-pirenena kosa anefa ny anton’ny fifampiresahana sy fifanakalozan-kevitra. Nanipika ireto filoha teo aloha ireto fa ny soa ho an’ny vahoaka Malagasy no laharam-pahamehana. Tsy tongatonga ho azy ny fihaonana toy izao fa efa mizotra any amin’ny fanomanana ny hoavin’ny firenena, izay efa tena latsaka an-davaka lalin’ny fahantrana sy ny faharavana, ka mila harenina. Mbola olobe tsy azo dinganina eto amin’ny firenena izy mirahalahy mianaka ireto, ary samy mahatsapa ho manana adidy amin’ny fanarenana an’i Madagasikara. Ohatra velona amin’ny fampihavanam-pirenena ihany koa i Zafy Albert sy Marc Ravalomanana satria raha zohiana ny tantaram-pirenena, dia anisan’ny olona nosokajian’ny rehetra tamin’ny hoe “sakay sy maso” izy ireo teo aloha, saingy nihavana ihany ary izao iarahan’ny vahoaka Malagasy mahita izao fa manga ny lanitra eo amin’ny fifandraisan’izy ireo.